War Saxaafedeed: Khudbadii Ugu Horaysay Ee Madaxweynaha Cusub Ee Somaliland | Xarshinonline News
War Saxaafedeed: Khudbadii Ugu Horaysay Ee Madaxweynaha Cusub Ee Somaliland
Hargeysa (Nnn)- Madaxweynaha cusub ee Somaliland ee goorta dhawayd lagu dhawaaqay Md. Axmed Maxamed Maxamed [Siilaanyo], ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyey umadda reer Somaliland meel ay joogaanba, Komishanka Doorashooyinka Qaranka, Xisbiyada Qaranka iyo dawlada Ethiopia.
Sidan-na waxa uu ku sheegay war-saxaafadeed uu ka soo saaray magaalada Hargeysa, kaas oo uu ku bilaabay sidan, “Walaalayaal :As salaamu calykum wa raxmatu laahi wa barakaatu.
Walaalayaalwaxaan maanta halkan uga soo tebinayaa umadda reer Somaliland meel ay joogaanba hambalyo iyo bogaadin, sida fiican ee ay inoogu dhamaatay doorashadii madaxtooyada ee aynu galnay 26, June, 2010.
Waxa kale oo aan leeyahay maanta keligeen maynu guulaysan,haddaynu nahay reer Kulmiye ee Somaliland oo dhan baa guulaysatay, dacal ilaa dacal. Haddaan qaar kooban wax ka tilmaamo anigoo kuwa aanan magacaabinna raalli gelin siinaya:
• Waxa guulaysatay taariikhdii halgankii dheeraa ee SNM iyo kuwii naftooda u huray xoraynta dalka.
• Waxaa guulaystay Balli Gubadle, Xaruntii Halganka.
• Waxa guulaystay baaqii u horreeyay ee nabadaynta beelaha Somaliland. Berbera ,albaabkeena addunka u furay, oo heshiiskii isa saamaxa beelaha lagaga dhawaaqay.
• Waxa guulaystay go’aankii dib-ula-soo-noqoshada madaxbanaanida Somaliland ee Burco.
• Waxa guulaystay shirkii nabadda dhidibada u aasay ee Axdi Qarameedkii dhalay, Distoorka iyo dimuquraadiyadda aynu ku caano maalnay ee aynu doorashooyinkii hore iyo tanba ku galnay. Boorame ayaa guulaysatay.
• Waxa guulaystay hoyga tusaalaha wada noolaanshaha iyo is kaashiga bulsho kala beelo ah, hoygii axdi goboleedka. Ceerigaabo ayaa guulaysatay.
• Waxa guulaysatay hoyga gadhwadeenimada iyo gaashaanka birta ah. Oodweyne ayaa guulaysatay.
• Waxa guulstay hoyga garaadka iyo geesinimada. Gabiley baa guulaysatay.
• Waxa guulaystay hoyga gobanimada Somaliland ee Laascaanood.
• Waxa guulaysatay xarunta ilbaxnimada iyo degenaanshaha. Saylac baa guulaysatay.
• Waxa guulaysatay xundhurta iyo xarunta Dalka Somaliland. Waa habboon. Waa Hargeysa mugweyn. Magaalo madaxda dalka ee umaddeena oo dhan marti gelisay ayaa guulaysatay.
• Waxa guulaysatay dimuquraadiyadda oo ah dariiqa keliya ee ummad xor ihi himiladeeda ku gaadhi karto.
• Waxa guulaysaty nabaddii .
• Waxa guulaysay ciidamada qaranka oo aan dib u derejo la’aan doonin.
• Waxa guulaystay dhallinyarada mustaqbalkeena ah, oo aan tahriib iyo shaqo la aan dib bada isugu guri doonin.
• Waxa guulaysatay culmadeenii oo aan dib damabysa afmiishaar iyo beenaale looga door bidi doonin bulshadana kaalinta ka geli doona karaamada ay ku leeyihiina ka heli doona.
• Waxa guulastay shaqaalaha dawladda oo aan dib ugu jri doonin cagajuglayn iyo tahdiid la xidhiidha fikirkooda siyaasadeed.
• Waxa guulaystay hooyooyinka suuqa cadceediisa ganacsiga yar la fadhiya oo cashuurtooda wax loogu qaban doono.
Waxa guulaystay golayaasha qaranka oo hab maamuuska ay leeyahiin ka heli doona xukuumadda Kulmiye.
• Waxa guulaysatay caddaaladda oo la sugi doono.
• Waxa guulaystay bulshada rayidka ah oo kaalinta ay horumarka kaga jirto taageero ku heli doonta.
• Waxa guulaystay ganacsatada dalka rag iyo haween leh, oo si caddaalad iyo sinaan ah, oo sharciga waafqsan u guddan doona hawlahooda ganacsi, xisbigay doonaan ha ahaadeene.
• Waxa guulaystay dadweynaha guud ahaan oo u harraadanaa adeeg hufan oo habsami loogu qabto.
• Waxa guulaystay reer guuraageena oo aad moodaysay inaan xukuumadahii ina soo a maray kuba xisaabtamin wax u qabad kooda.
Salaamu calaykum wa raxmatu laahi.”
← Xisbiga KULMIYE OO KU GUULAYSTAY DOORASHADII SOMALILAND iyo Codadka ay xisbiyadu kala heleen
Natiijada Codadka ay xisbiyadu ka kala heleen degmooyinka iyo Gobollada Dalka →